Tag: itoobiya | Sagal Radio Services
Afhayeenka Baarlamaanka Ethiopia oo loo doortay ruux dumar ah
Baarlamaanka dalka Ethiopia ayaa markii ugu horeysay loo doortay in guddoomiye ay ka noqoto haweeney waxaana xilkaas la wareegay wasiirkii hore ee haweenka dowlada Ethiopia Muferiat Kamil.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya oo Geeridii Godane ku Tilmaamay Guul weyn
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya, Hailemariam Desalegn ayaa markii ugu horreysay ka hadlay dhimashadii hoggaamiyaha Al-shabaab, Axmed Cabdi Ow-Maxamuud Godane, isagoo sheegay in taasi ay guul Soomaaliya iyo gobolka oo dhan u soo hoyatay.
Booliska Itoobiya oo xiray 25 dhalinyaro Soomaali lagu eedeeyay inay weeraro fulin rabeen –
Booliska Itoobiya ayaa xiray ilaa 25 dhalinyaro Soomaali lagu eedeeyay inay qorsheynayeen in weeraro ka fuliyaan dalka, kuwaasoo la sheegay inay xiriir la leeyihiin Al-Shabaab.
Dowladda Itoobiya oo ku dhawaaqday in ay dagaalo ku qaadeyso meelaha ay ku sugan yihiin shabaab ee Dalka Soomaaliya
Dowladda Itoobiya ayaa ku dhawaaqday in dagaal adag la geli doonto Al-Shabaabka Soomaaliya, kadib markii dhowaan ay ku biirtay howl galka midowga Afrika ee AMISOM.
Diyaaradda Ethiopian Airlines oo duulimaadyo ku tagaysa Muqdisho
Shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines ayaa lagu wadaa inay markii ugu horreysay duulimaadyo cusub ku tagto magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya, kaddib heshiis iskaashi oo dhexmaray Soomaaliya iyo Itoobiya.
RW ITOOBIYA: "Al-shabaab meel walba waan kula Dagaalamaynaa"
Ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ka hadlay ciidamada Itoobiya ee ku biiray AMISOM markii ugu horreysay, isagoo sheegay in sababtu ay tahay sidii ay uga qaybqaadan lahaayeen dagaalka Al-shabaab looga saarayo deegaannada ay kaga sugan yihiin Soomaaliya.
Daawo Sawiradda: Ciidamada Itobiya oo Koofiyadii cagaarnayd ee Amisom Baydhabo logu xiray..
Ciidamada Itoobiya ayaa si rasmi ah ugu biiray howl galka Nabad ilaalinta AMISOM, iyagoo noqonaya dalkii lixaad oo ciidamo ka socda Midowga Afrika oo ciidamo ka jooga Soomaaliya.
Itoobiya oo sheegtay inay adkaynayso xiriirka ay la leedahay Soomaaliya
Safiirka dalka Itoobiya u fadhiya dalka Soomaaliya Wondimu Asaminew ayaa sheegay in ay sii ballaarinayaan xiriirka Itoobiya kala dhaxeeya Soomaaliya.
Laba qof oo Soomaali ah ayaa dhintay kaddib markii ay la qarxday bambo ay farsameynayeen ay kula qaraxday guri ay ka deggenaayeen magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya, halkaasoo ay ku qulqulayeen kumannaan qof si ay u daawadaan ciyaar ka tirsan is-reeb-reebka koobka adduunka oo maanta ka dhacay Addis Ababa.